Kuhle Inkundla eku-inthanethi kusukela ngo-2004
ngaphezulu ...Ukuthuthukiswa njalo (2022)
Bhalisela iforamu yamahhala
Yenza ukukhetha kwegama le-akhawunti (isizinda sakho) bese ugcwalisa ikheli lakho le-imeyili. Khumbula ukuthi iphasiwedi yakho eyinhloko yomqondisi izothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili. Awusoze uthole ugaxekile noma ukukhangisa kithi. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi i-imeyili enephasiwedi yakho eyinhloko yomqondisi idluliselwe kwifolda yakho yogaxekile.
Lapha uthola isithangami samahhala ngokuphelele esinezici eziningi. Dala injini yokusesha yamahhala eyenziwe kahle, inkundla yamahhala, esheshayo futhi elula ngamaminithi ambalwa, iqinisekisiwe mahhala. Ungashintsha imibala, unikeze amaqoqo, uvimbele abasebenzisi, wakhe amaqembu nokunye okuningi. Ukusethwa kwenkundla yakho kuzenzakalela ngokugcwele, imizuzwana nje ngemuva kokungena ngemvume esithangamini sakho kusebenza ngokuphelele, ungafinyelela kuyo ngokushesha bese uyivumelanisa nezifiso zakho nemibono. Zisindise ubunzima nomsebenzi wokufakwa kwenkundla kwiseva. Ubuhlungu bekhanda ngokutholakala, ithrafikhi kanye nokunakekelwa kwezinto zesikhashana yinto yesikhathi esedlule nenkundla yakho.
Igama le-akhawunti [A-z no-0-9]: .freeboard.at
Ngokubhaliswa kwakho wamukela Imigomo yokusetshenziswa.
Lapha uthola isithangami samahhala ngokuphelele esinezici eziningi. Dala injini yokusesha yamahhala eyenziwe kahle, inkundla yamahhala, esheshayo futhi elula ngamaminithi ambalwa, iqinisekisiwe mahhala. Ungashintsha imibala, unikeze amaqoqo, uvimbele abasebenzisi, wakhe amaqembu nokunye okuningi. Ukusethwa kwenkundla yakho kuzenzakalela ngokugcwele, imizuzwana nje ngemuva kokungena ngemvume esithangamini sakho kusebenza ngokuphelele, ungafinyelela kuyo ngokushesha bese uyivumelanisa nezifiso zakho nemibono. Zisindise ubunzima nomsebenzi wokufakwa kwenkundla kwiseva. Ubuhlungu bekhanda ngokutholakala, ithrafikhi kanye nokunakekelwa kwezinto zesikhashana yinto yesikhathi esedlule nenkundla yakho. Imibandela yokusebenzisa kusukela ekusetjenzisweni iyasebenza.